मलमासमा सेक्स गर्न नहुने हो ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २ असार २०७२, बुधबार ०५:१४ |
मंगलवारबाट मलमास शुरु भएको छ । यो संगै विवाहित जोडीहरु पनि अलग बस्न थालेका छन् । वैदिक मान्याता अनुसार नवविवाहित जोडीहरुले अब कम्तिमा एक महिना सँगै बस्न र सुत्न हुँदैन । असार १ गतेबाट शुरु भएको मलमास अर्थात अधिकमास ठीक एक महिनासम्म अर्थात असार ३१ गते रातिसम्म रहनेछ ।
मलमासको समयमा नवविवाहित जोडीहरु अलग बस्नुपर्ने र गर्भधारण गर्न नहुने परम्परागत मान्यता छ । यसको अर्थ मलमासको अवधिमा सेक्स गर्न नहुने हो ? यो धेरैजनाको प्रश्न हो । विज्ञहरु भन्छन्-मलमासमा सेक्स गर्न नहुने होइन तर यो अवधिमा गर्भधारण भएको बच्चा राम्रो हुँदैन ।
मलमासमा यौनकार्य नगर्न सुझाब दिँदै ज्योतिष पण्डितहरुले यस्तोबेला गर्भ बसे परिवारलाई कष्ट हुन सक्ने बताएका छन् ।
ज्योतिष आत्माराम भण्डारीका अनुसार मलमासको बेलामा गर्भ रह्यो भने बच्चा त जन्मिन्छ तर, त्यो बच्चाको भविष्य रेखा ज्योतिषलाई पनि थाहा हुँदैन ।
तर, गर्भधारण बाहेकको सहवासका बारेमा शास्त्र र विज्ञहरुले केही बोलेका छैनन् । तर नवविवाहित जोडीहरु चाहिँ अलग बस्नु भन्छन् । यस्तो बेला नवविवाहित युवती माइती बस्ने प्रचलन छ ।
यो एक महिनाको मलमास अवधिमा कुनै पनि शुभ कार्य र पितृकार्य गर्न हुँदैन भन्ने हिन्दु धार्मिक मान्यता छ । यसबीचमा पर्ने तिथि श्राद्ध पनि मलमास सकिएपछि मात्रै गरिन्छ । मलमासकै कारण यस वर्षका सबै चाडपर्व एक महिना पछि सरेका छन् ।
अधिकमासकै कारण असारमा सधैं हुने विहेका लगन यस वर्ष छैनन् । विवाह, ब्रतबन्ध, गृह प्रवेश, नयाँ ठाउँको यात्रा कुनै पनि शुभकार्य यस अवधिमा नगर्नु राम्रो हुने ज्योतिषको सुझाव छ ।
मलमासको सम्बन्ध खगोल विज्ञानसँग पनि रहेको ज्योतिषशास्त्री बताउँछन् । हरेक ३२ महिना १६ दिन वितेपछि मलमास सुरु हुन्छ । १९ वर्षपछि त्यही महिना, त्यही दिनमा आउँछ ।
Previousअहिलेबाटै भन्न थाले–टोनु विल गेट थिङ्स डन !
Nextएसएलसी परीक्षाको नतिजा शुक्रवार सार्वजनिक हुने
२०१८ मा बालबालिकाको लागि रोजिएका लोकप्रिय नाम
२० बैशाख २०७५, बिहीबार ०९:१९
नेवार समुदायले क्वाँटी खाने पर्व गुँपुन्ही मनाउँदै
१० भाद्र २०७५, आईतवार ०३:३५
प्लाष्टिकको बोतलमा पानी पिउनु खतरनाक
२७ माघ २०७३, बिहीबार १०:१०
सबैभन्दा धेरै चोरेर वेलायतमा चोरले बनाए कीर्तिमान
८ मंसिर २०७२, मंगलवार ०३:२०
वाइडबडी छानबिनः जनताको आँखामा छारो
सोमबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपात हुने
अब घरमै बसेर उच्च शिक्षा, यस्ता छन् उपलब्ध कोर्स